300 oo qoys oo barakacayaal ahaa ayaa gaaray Degmada Diinsoor | Universal Somali TV
300 oo qoys oo barakacayaal ahaa ayaa gaaray Degmada Diinsoor
Abaaraha baahsan ee laga soo sheegayo qaybo ka mida Gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Somaliya ayaa saameeyay dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda. Dadkaasi waxaa ka mid ah boqolaal qoys oo abaarta ku xoolo beelay, oo u soo barakacay Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay.
Maamulka Degmada Diinsoor ayaa sheegay in 300 oo qoys ay maalmihii ugu dambeysay soo gaareen degmadaasi, kuwaa oo halkaasi soo maciin-biday.
Maamulka ayaa sheegay in qoysaskaasi ay ka soo barakaceen tuulooyin hoos-yimaada degmadaasi, ka dib markii ay abaarta ka dilaacday.
Cabdisalaan Xaaji Siidow, Gudoomiyaha Degmada Diinsoor ayaa sheegay in qoysaskaasi ay ku jiraan dad uu sheegay inay si khasab ah guryahoodii uga soo barakiciyeen maleeshiyada Al Shabaab.
"Waxaa soo barakiciyay dadka meesha joogga ee Al Shabaab, aragtidooda oo ay diideen ayay malaha u soo barakiciyeen. Hadda wax sabab ah oo ay u soo barakiciyeen, maysan sheegin." Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Gudoomiyaha ayaa yiri "Dadkaasi, dad xoolo dhaqato ayay ahaayeen oo xoolihii ka dhammaadeen, dalagii beerahana muddo intaasi oo sano ah wax ugama soo bixin. Waa dad ay dhibaato ka muuqato."
Waxaa uu sheegay inaysan dadkaasi haysan wax agabyo ah iyo raashiin toona, ayna dar xumeysan yihiin, inkastoo sida uu sheegay ay dib u dejin ugu sameeyeen dhul bannaan.
"Ma haystaan agabyadii ay guryaha ka sameysan lahaayeen, raashiin ma haystaan, wax hadda la dhihi karo way haystaan malaha." Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaasi ku daray "Waxaan u diyaarinay laba boos oo degmada ah, labadaasi boos waan xaaqnay oo halkaasi ayaan dib u dejin fiican uga sameynay. Dadkan waa dadka dhibaateysan, cid kasta oo kaalin ka qaadan karto, haka qaadato."
Qoysaska faraha badan ee gaaray degmadaasi ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli wadooyinka soo gala Diinsoor ay go'doomiyeen maleeshiyada Al Shabaab, iyagoo badeecadaha ka horjoogsaday inay soo galaan.
Kan-xigaNin Janaraal ahaa oo lagu dilay banna...
Kan-horeMadaxweynaha Hirshabelle oo booqday S...
64,699,923 unique visits